Guddiga fulinta JCPOA oo ka wada hadlaya kordhinta cunaqabatay... | Universal Somali TV
Guddiga fulinta JCPOA oo ka wada hadlaya kordhinta cunaqabatayta maraykanka ee Iran magaalada Vienna
Guddiga wadajirka ah ee la socodka hirgelinta 2015 ee heshiiska nukliyarka u dhexeeya Tehran iyo lixda awoodaha dunida ayaa kulan ku yeelanaya Vienna, Austria, si ay uga wada hadlaan ay dawlada Maraykanka oo dheeraysay sharciga cunaqabatayn ka dhanka-Iran.
Gudiga ilaalada ayaa yeeshay kulankoodii lixaad maanta, iyadoo ay kasoo qayb galeen ku xigeenada iyo agaasimayaasha siyaasadeed ee Iran iyo dawladaha P5 + 1 -ee Russia, China, France, Britain, Maraykanka iyo Germany - iyo sidoo kale Agaasimaha Siyaasadda ee Midowga Yurub Helga Schmid.
Waxaa la qabtay kulankoodii ugu horeyay bishii October 2015, bilooyin ka dib markii labada dhinac ay qalinka ku duugeen heshiiska nuclearka Iiraan, oo loo yaqaan Qorshaha Midaysan Comprehensive of Action (JCPOA).
JCPOA, kaas oo dhaqan galay bishii January 2016, ayaa laga qaaday cunaqabatayn la xiriira nuclear ee ka dhan ah Iran beddelkeeda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ayaa lagu heshiiiyay inay hakiyaan barnaamijkeeda nuclearka.
Ka hor kulankii maanta, khubarada Iran ayaa la kulmay dhigooda ee ergada wadamada kale, ay ka mid yihiin Maraykanka.
Kan-xigaMadaxweynaha Uganda oo wiilkiisa, wey...
Kan-hore Ugu yaraan 25 qof oo ku dhintay daad...
40,809,423 unique visits